Xog: Sidee ku yimid safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee IMAARAADKA CARABTA? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Sidee ku yimid safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee IMAARAADKA CARABTA?
Abu Dhabi (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhigay Imaaraadka Carabta dalkii ugu horreeyey ee uu booqday kadib markii dib loo doortay 15-kii May 2022.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in socdaalka Xasan Sheekh uu ku yimid codsiyo soo noqnoqday oo ka imanayey Abu Dhabi tan iyo markii madaxweynaha dib loo doortay.
“Codsiga iyo cadaadiska ka imanayey Abu Dhabi wuxuu mararka qaar u muuqday baryootan, aad ayey uga go’neyd Imaaraadka in madaxweynaha uu ku sharfo booqashada koowaad. Marar badan ayuu safiirkooda isaga soo daba laabtay Villa Somalia,” ayuu yiri il-wareed ku dhow madaxweynaha.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, Imaaraadka Carabta ayaa ballan-qaaday taagero oo weyn oo dhanka amniga ah oo ay siinayaan Soomaaliya, si gaar ahna in dalka laga xoreeyo Al-Shabaab muddo kooban gudaheed.